ငယ်ကချစ် နှစ်ပေါင်းတစ်ရာ – Grab Love Story
လူတိုင်းမှာ နှလုံးသားတခုစီ ရှိကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမဆီမှာ ရှိတဲ့ နှလုံးသားကိုတော့ ဖောက်ထုတ်ပစ်လိုက်ချင်သည်။ နှလုံးသားမရှိရင် အသက်ဆက်မရှင်နိုင်ဘူး ဆိုတာသိပေမဲ့ ကျမ ဆက်ပြီး မခံစားနိုင်တော့လို့ပါ။ ဒီလို ဆောင်းလေမြူးတဲ့ ညချမ်းအခါမျိုးဆို သာတောင် ဆိုးလှပါသည်။ ခုတင်တွေးရင် နှလုံးသားထဲ တဆစ်ဆစ်နာလှ၏။ တသက်မှာ တယောက်သာ ချစ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်တွေမို့ ကျမ လုံးဝယုံကြည်ခဲ့ပြီ။ ယနေ့ထက်တိုင် သူ့ရဲ့ ပုံရိပ်တွေ၊ သူ့ရဲ့စကားသံတွေ၊ သူ့ရဲ့အနံ့အသက်လေးတွေ၊ သူ့ရဲ့အထိအတွေ့တွေက ကျမ ကိုယ်ခန္တာနဲ့ နှလုံးသားကို လှည့်ပတ်လှောင်မြိုက်လို့ ကောင်းနေတုန်း။ ပူလောင်လွန်းလှတယ် ပြောမလား၊ သေချင်လောက်အောင် ဘ၀ကို စိတ်ကုန်စေတာလား ဆိုတာသေချာမသိ။ ယခုမှာတော့ သာ၍သာ ဆိုးနေလေပြီ။ ကျမဘ၀မှာ သတိရ အမှတ်ရစရာ ညအချိန်တွေက များသမို့ ခုလိုညချမ်းမတော့ ကျမနှလုံးသားကို ဦးနှောက်နဲ့ ထိန်းချုပ်ဖို့ရာ မတက်နိုင်တော့ပြီထင်။ အတွေးတွေ လွန်နေတာနှင့် နံနက်အစာခံစာအတွက် ကြိုချက်နေသော ထမင်းအို ဝေကျနေတာတောင် မမြင်တော့ပေ။ ထမင်းအိုးဖုံးကို လတ်နှီးမပါပဲ မေ့လျော့ခါ လှမ်းဖယ်လိုက်၏။
တချိန်က ဒီနေရာ ဒီအချိန်လေးမှာပဲ ခုလိုအပူလောင်ခဲ့တုန်းက နွေးထွေးလှတဲ့ သူ့လက်တစုံက ချက်ချင်းရောက်လာပြီး အေးလှတဲ့ သူ့နားရွက်ကို ကပ်ခါ အပူသက်သာအောင် ပြုလုပ်ပေးခဲ့ဖူးသည်။ ဟုတ်ပါတယ် ဒီမီးဖိုချောင်လေးမှာ သူနှင့် ကျမခိုးချိန်းခဲ့တယ်။ ခိုးချိန်းတယ် ဆိုတာထက် သူ အတင့်ရဲစွာ ခိုးဝင်ခြင်းဖြစ်သည်က ပိုမှန်၏။ မနက် ငါးနာရီလောက် လယ်ထဲဆင်းဖို့ရန် အစာခံစာအတွက် ညထဲက ချက်နေတဲ့ အချိန်ပေါ့။ ကျမ မှတ်မိပါသေးတယ်။ ကျမတို့ ချစ်သူသက်တမ်း သုံးလတွင်ပေါ့။ ချစ်သူတွေဆိုပေမဲ့ သူများတွေလို ချစ်လား အဖြေတောင်း ချစ်တယ် အဖြေပေး ချစ်သူမျိုးမဟုတ်။ တယောက်နဲ့ တယောက် နှလုံးသားခြင်း နီးခါ နားလည်မှုကြီးစွာ ချစ်ကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ အဲ့ဒိနေ့ညက အဖေကြီးနဲ့ အမေကြီးကလဲ တနေ့လုံး စပါးရိတ်သိမ်းကြကျရတာမို့ ပင်ပန်းကြီးစွာ အိပ်မောကျနေကြတဲ့ အချိန်ပေါ့။ ကျမ တယောက်ထဲသာ မီးဖိုချောင်ထဲ ချက်ပြုပ်နေတဲ့ အချိန်။ ထမင်းအိုး ဝေကျလို့ အမှတ်တမဲ့ လတ်နှင့် လှမ်းယူလိုက်ပူသွားတာကို သူဘယ်အချိန်ထဲက ရောက်နေတယ် မသိ။ ကျမလတ်ကို ကိုင်ခါ သူ့နားတွင် အပ်ထားလေ၏။ လတ်က အပူဘယ်ဆီနေမှန်း မသိတော့။ ကျမ ထိတ်လွန်လွန်းလို့ လိပ်ပြာလွင့်မတက် ဖြစ်သွား၏။ ကျမလေ တကယ်ပါ။ ကျမဘ၀မှာ အပျော်ဆုံးနဲ့ ရင်အခုန်ဆုံးနေ့ရယ်ပါ။ ကျမမှာလဲ အိမ်အပေါ်မှာ ဖေကြီးနှင့် မေကြီးရှိ၍ ကြောက်ကလဲ ကြောက်သမို့ သူ့ကို အတင်းနှင်လွတ်၏။ မရ။ ကျမမှာ အသံလဲ မထွက်ရဲ။ မျက်နာငယ်လေးဖြင့် မငိုရုံတမယ် ဟန်ပြုခါ ပြန်လွတ်သော်လည်း မရ။ အံ့မယ် မြို့ကြီးကျောင်းမှာ စာသွားသွားသင်နေတဲ့သူက အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာပါပဲ။ ကျမရဲ့ ပုခုံးလေးကိုကိုင်လိုက် နောက်ပြီး လတ်နှစ်ဖက်က လှိုင်းလေးတွေလို လုပ်ပြပြီး တိုးတိုးလေးပြောနေတယ်။
စိတ်လျော့စိတ်လျော့ ဘာမှမဖြစ်ဖူး။ အသက်ကို ပုံမှန်ရှုတဲ့။ သူပြောတဲ့အတိုင်း ကျမလုပ်ကြည့်ပါသည်။ နည်းနည်းတော့ တည်ငြိမ်လာတယ် ဆိုပေမဲ့ ဖေကြီးနဲ့ မေကြီးသိမှာ ကြောက်တာထက် ယောက်ျားသားတယောက်နဲ့ ဒီလိုညကြီး နှစ်ယောက်ထဲဆိုတာမျိုးက ကျမနှလုံးသား ဗြောင်ဆန်းအောင် ခုန်နေလို့ ဘယ်လိုမှ ဆောက်တည်ရာမရ။ နောက်ထပ် ပိုဆိုးသည်က ပါးလေးကို နမ်းလို့ရမလားတဲ့။ တားသော်လည်းမထူး.. နမ်းပြီး ပြန်မှာလားဆိုတော့ ခေါင်းငြိမ့်ပြ၏။ ဒါဆိုလဲ မြန်မြန်နမ်း ဆိုလိုက်တော့ မျက်လုံးပိတ်ထားတဲ့။ သူပြောတာလဲ ဟုတ်ပါတယ်။ သူနမ်းတော့မှာကို သိလို့လားမသိ.. ကျမ တကိုယ်လုံးထူအမ်းနေပြီး ခြေနှင့်မြေတောင် မထိချင်တော့ပြီး။ ချစ်ရလွန်းတဲ့ ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ အနမ်းကို မိန်းမသားဖြစ်တဲ့ ကျမ ဘ၀မှာ ပထမဆုံးမို့ ရင်ခုန်ကြောက်ရွံ့လှသည်။ခန္တာကိုယ်တခုလုံးမှာလဲ သွေးလေမဲ့သလိုလို နားထဲလဲ ဘာအသံမှလည်း မကြားရတော့ပြီး။ ဘယ်လောက်ပင် ကြာသွားတယ်ဆိုတာ မသိလိုက်။ နမ်းနိုးနမ်းနိုးနှင့် စောင့်နေလိုက်တာ တော်တော်နှင့် မနမ်းသေး။ မျက်စိကို မဖွင့်ပဲ သူ့အနမ်းကို ထပ်စောင့်နေလိုက်သေး၏။ နောက်ဆုံး မနမ်းသေးဘူးလားဆိုပြီး မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကျမရဲ့ ရှေ့တူရှုအရှေ့ဘက်တွင် ရပ်လျက်သူမရှိတော့။
ဟင်.. သူ နမ်းမယ် ဆိုပြီး ဘယ်ရောက်သွားပြီးလဲ။ သူ့နောက်ပြောင်ပြီး ပြန်ထွက်သွားပြီးလား။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ကျမ သတိကပ်မိတာ.. ရပ်လျက်သာ ကျမ ခြေထောက်တွေ ဆောင်းလေးတို့ တိုးခပ်မှုကြောင့် အေးနေတယ် ဆိုတာပဲ။ ကျမ အောက်ကို ငုံကြည့်တော့ ကျမ မျက်လုံးတွေ ပျာကနဲဖြစ်သွားသည်။ အေးပါတယ် ဆိုလို့ …သူ ရယ်လေ… သူ ကျမ ထမကို မခါ တဖက် ရေနံဆီမီးခွက် မီးအလင်းရောင်လေးနဲ့ ကျမ အမွေးပြိုင်းပြိုင်းထူနေတဲ့ ရွှေခရုလေးကို ကြည့်နေခြင်းပါပဲ။ ကျမထင်သ်ည ပထမတော့ သူလေ… ကျမ မတ်တပ်ရပ်လျက်သား အနည်းကားသာသာ ကားနေတဲ့ခြေထောက် နှစ်ခုကြားကို ခြေဖမိုးအရင်းကနေ ထမီလေးက အသာလပ်လို့ ကြည့်နေမှာပဲ။ နောက်တော့ ကျမ မျက်စိမဖွင့်မဖွင့်မိ ထမီကို ဒူးကျော်သည် ထိကို မခါ ကြည့်နေလိုက်တာ။ ကျမ ချက်ချင်းကြီး တားမဆီးခင် စွန့်အစွာ ကျက်သေသေမိနေ၏။ နောက်မှ ဘာလုပ်တာလဲ နင်… နင်.. ဟူသော ဟန်အမှုယာပြ လေသံဖြင့် စိတ်ဆိုးအားကြီးစွာ ဖိဖုံးလိုက်၏။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်တယ် မသိ။ ကျမရဲ့ ဒူးတွေ ညွန့်ကနဲ့ ခွေကျလှဲလေရတော့သည်။ အသင့်ဆိုသလို သူက ဒူးထောက်ခါ ကျမအားလှဲလျက်သား ပွေ့ဖက်ထားရင်း ကျမပါးတွေကို နမ်းပါတော့။ ကျမနဖူးတွေကော ကျမရဲ့ လည်ပင်းတွေကိုကော။ နောက်ပြီး ကျမရဲ့ ရင်သားတွေကို ဆုတ်နှယ်လျက်ပေါ့။ ကျမ ဆေးမိထားတဲ့ သူတယောက်လိုလို ကျမရဲ့ ခွန်အားတွေကို ဆုတ်ထုတ်လွတ်ပစ်လိုက်သလိုလို အင်အားတဆက်မှ မရှိတော့ခါ သူပြုသမျှကို နုရတော့၏။ ကျမထင်တယ် ဒါ နှလုံးသားက တောင်းတတဲ့ ဆန္ဒမဟုတ်။ ကျမ ခန္တာကိုယ်က တောင်းတတဲ့ ဆန္ဒဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ ကျမတို့ အပျိုဖျန်းလေးတွေကြား တူတူချင်း စုံကြရင်ဖြင့် ကြားနေကြ ရင်ခုန်ဖွယ် ဒီကိစ္စစကားတွေမို့ ကျမ တကယ်ပဲ ကျင်နာယုယမှုကို ခံချင်ပါသည်။ ယခုတော့ဖြင့် အကြောင်းကြီးငယ်လဲ မရှိနိုင်။ ကျင်နာယုယသူမှာလဲ ချစ်လွန်းသူမို့ ငြိမ်နေလိုက်တော့သည်။
အလွန်အင်မတန်မှ အရသာရှိလိုက်တဲ့ ရှိချင်းနယ်။ သူ့ရဲ့ အနမ်းတွေ အကိုင်အတွယ်တွေ၊ အထိအတွေ့တွေက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဆန်းကျယ်ဆုံး အကောင်းဆုံးလို့လားတောင် ထင်ရ၏။ ချစ်လွန်းသူ သူ့ကိုလဲ စိတ်ချမ်းသာစေချင်သည်။ နမ်းတွေတုန်း သူ့လတ်တွေက ကျမအတွင်းရင်သားတွေကို စုပ်နမ်းဖို့ထင် အပေါ်အကျီကို လပ်ခါ သူ့လတ်ကို အတင်းလျိုထည့်တော့သည်။ ခက်ပြီ ခက်ပြီ.. ကျမပါးစပ်ပြောနေချင်းသာ ဖြစ်သည်။ နွေးထွေးလှတဲ့ သူ့လတ်တွေက ကျမရင်နှစ်စုံပြောင်းပြန် လှန်မတက် အောင်စုန်ဆန်နယ်နေတော့သည်။ တခါတခါ ကျမရဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ချေလိုက်တိုင်း တကိုယ်လုံး ဓာတ်လိုက်သလို ကျင်ကနဲ့ တက်သွား၏။ ကျမ သူ့လတ်မောင်းကို တင်းကြပ်စွာသာ ဖတ်ထားမိတော့သည်။ ပထမဆုံးချိန်းတွေ့သည့် နေ့၌ ဒီတင်ပဲ တခန်းရပ်ပြီ မထင်နဲ့။ သူ့လတ်တွေက ကျမရွှေခရုလေး ရှိရာဆီကို ရွေ့လျားလာလို့ နေပြီ။ ဒီတခါတော့ မရပါ။ ကျမရဲ့ စိတ်တွေကို အတက်နိုင်ဆုံး ထိန်းလိုက်ရင်း သူ့လတ်တွေကို ကိုင်ခါ တော်သင့်ပြီ ကျေနပ်ပါတော့လို့ ပြောလိုက်တော့ သူ မျက်နာလေးတချက်ပျက်ရင်း ကျမကို သေချာကြည့်နေတယ်။ နောက် ကျမ ဆီးခုံပေါ်က သူ့လတ်ကလေးကို ရုတ်ရင်း သက်ပျင်းကလေး ချတယ်။ ပြီးတော့ လေးလျပြီး သနားစဖွယ် မျက်နာငယ်အသံလေးနဲ့ ပြောတယ် ကိုင်ဖူးတယ် ရှိအောင် ကိုင်ကြည့်ပါရစေ တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့။ ကျမ အံ့သြသွားတယ်။ ကျမ ဒေါသထွက်နေတဲ့ အမှုအယာနှင့် ကိုင်ရင် ဟိုထင်းစင်ပေါ်က ဓားမနဲ့ကို ခုတ်သတ်မှာလို့ ဟန်လုပ်ခါ ပြောလိုက်တယ်။
မျက်နာငယ်လေးနဲ့ပါပဲ သူထပ်ပြီး တောင်းဆိုးတယ်။ အမှန်တိုင်းပြောရရင် ကျမရဲ့ ရွှေခရုလေးကို ကိုင်ခွင့်တောင်းထဲက ကျမရွှေခရုလေးမှာ ဗလောင်ဆူ ဗျာဘာခက်နေပြီလေ။ ကိုင်တာလောက်တော့ သေမသွားနိုင်ပါဘူး။ ကျမ ကိုယ်၌ကကို အကိုင်ချင်ခံ အပွတ်သပ်ခံချင်နေတာ မဟုတ်လား။ ကဲပါလေ.. ဒါပေမဲ့ ကျမ မျက်နာကို ခပ်တင်းတင်းထား မျက်မှောင်ကိုကြုတ်လျက် ကိုင်ပြီးရင် ပြန်မှာလား။ သူ ခေါင်းငြိမ့်၏။ ကဲ.. ကိုင်တော့။ အံ့မယ် သူပြုံးပြီး ကျမရဲ့ ပါးလေးကိုနမ်းတယ်။ ကျမလေ ရင်ထဲ ပျော်လိုက်တာ။ ဘ၀မှာ ပထမဆုံးနှင့် အပျော်ဆုံးပေတည်း။ ဒူးထောက်ထိုင်လျက် ရှိနေတဲ့ သူ့ပေါင်ပေါ်တွင် ခေါင်းလေးတင်မှီလျက် ခြေနှစ်ဖက်ကို စင်းခါ ကားထားလိုက်လေ၏။ နောက် သူကပြောတယ် မျက်လုံးလေး မိတ်ထားတဲ့။ ကျမ မှိတ်လိုက်မိတယ်။ သူလတ်က ကျမထမီကို လှန်ခါ ရွှေခရုလေးကို ကိုင်မယ် အလုပ်။ ကျမ နည်းနည်းစိတ်ခုခါ သူ့အား စူးစိုက်ကြည့်ရင်း ထမီမလှန်နဲ့ အပေါ်ကပဲ ကိုင် လို့ အန်ကျိတ်ခါ ခပ်တင်းတင်းတိုးတိုး ပြောလိုက်၏။ အဲ့ဒီတော့မှ သူက နှစ်သိမ့်တဲ့ အမှုအယာနဲ့ လတ်လေးကာပြရင်း ဟုတ်ပြီးတဲ့ မျက်လုံးပြန်မိတ်လိုက် တဲ့။ ကျမရွှေခရုလေးကို ထမီပေါ်ကပဲ ထိတွေကိုင်တွယ်လိုက်တော့တယ်။ ကျမ ရွှေခရုလေးရဲ့ အက်ကွဲကြောင်းလေးကြား သူလတ်လေးတွေက လျိုချီတလှည့် နိုတ်ချီတလှည့်မို ကျမ အသက်ဘယ်က ထွက်ရမည်ဆိုတာကို မသိ။ သူ့ကို ကျမရွှေခရုလေးအား အချိန်မည်မျှမည်၍ ပေးကိုင်လိုက်သည်ကို မဆိုထားနှင့် အချိန်တွေကို ကုန်မှာကို ကျမကြောက်နေသလိုလို။ ဒုတိယအကြိမ် အရသာ ရှိလိုက်ချင်းနုယ်။ လှဲသေသွားနိုင် လောက်အောင် ပါပဲ။ ခံလို့ အလွန် ကောင်းလွန်းလှတယ်။
ကျမ ဘယ်ပြောပြရမလဲ။ သူလတ်လေးနဲ့ ကျမရွှေခရုလေးကို ပွတ်နေတဲ့ အချိန်တုန်းက ကျမထင်တယ် တကမ္ဘာလုံးမှာ ကျမတို့ ချစ်သူနှစ်ဦးထဲ ရှိတော့တယ်လို့ ထင်မိတယ်။ မည်မျှကြာလိုက်သည်မသိ ကျမ သူ့လတ်ထဲ နစ်မျောလိုက်တာ သတိဝင်လာလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ကျမထမီက ကျမ ဗိုက်ပေါ်ရောက်နှင့်ပြီး အသားချင်းထိထိ ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကို ကိုင်နှင့်နေပြီ။ ကျမလဲ အားတင်းခါ ရပ်သင့်ပြီ အတွေးကြောင့် ပြောမည် အပြု သူ့ရဲ့ အမြန် တစောင်းတိုက်မှုကြောင့် ကျမ တကိုယ်လုံးကော့တက်ခါ တဆက်ဆက် တုန်ခါလာတော့သည်။ တခဏခြင်းပင် ရင်ဘက်ထဲ ရင်ခုန်မြန် အမောစို့ အထွဋ်အထိပ်သို့ ခါ မျက်ဖြူဆိုက်ရလေတော့သည်။ ဘ၀မှာ တတိယအကြိမ် အရသာ ရှိလိုက်ခြင်းနုယ်။ တကိုယ်လုံး မောဟိုက်ခြင်းနှင့်အတူ ခဏတာ မိန်းနေမိလိုက်၏။ အဲ့ဒိမှာ သတိထားမိလိုက်တာက သူက ကျမရဲ့ ကိုယ်ပေါ်မှာ မှောက်လျက်သား။ ဒီအထိကို ကျမလတ်ခိုင်နိုင်ပေမဲ့ သူရဲ့လေ.. ဟို.. ဟို အချောင်းက ကျမရဲ့ ရွှေခရုလေးအ၀ကို လာတေ့မှ ကျမှ လန့်ဖျန့်ခါ အတင်းရုန်းလေတော့သည်။ ကျမ ပါးစပ်ကလဲ သူမျက်နာတည့်တည့်အား လတ်ညိုးထိုးခါ နင်နော် နင်နော်.. မယုတ်မာနဲ့ ဒီထက်ပိုပြီး ယောက်တက်မလာနဲ့ …နင့်ကို ငါသတ်မှာနော်… နင်သေမယ်နော်.. တကယ်စိတ်ဆိုးစွာဖြင့် ပြောမိခြင်းကြောင့် အသံအနည်းငယ် ကျယ်သွား၏။ ကျမ၏ ဒေါသသံကြောင့် သူကဗျာကလျာ ကျမ ပါးစပ်ကို ပိတ်လိုက်ပြီး အိမ်ကဘရံခါဗန်းထပ်ကို မမြင်ရပေမဲ့ ခေါင်းထောင်ကြည့်ခါ နားစွင့်လိုက်၏။ ကျမ ဖေကြီးဟောက်သံက မရပ်ပေမဲ့။ မေကြီးဟောက်သံခဏ ရပ်သွား၏။ သူနှင့် ကျမ ခဏငြိမ်နေလိုက်၏။ ခဏကြာတော့ မေကြီးဟောက်သံ ထပ်ကြားရလို့ ကျမမှာ သက်ပျင်းချနိုင်တော့သည်။
ဒီတခါတော့ သူက ကျွန်မအား တောင်းပန်းတိုးလျိုပြန်၏။ ခုမှ ပြော၏ တကယ်ချစ်တဲ့ အကြောင်းတွေး မနာပါဘူး ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ စုံလို့။ ဒီအရသာကလဲ သောက်လေသောက်ငတ်မပြေ ဆိုသိအတိုင်း ထိလိုက်တာ ချက်ချင်းမီးတောက် သကဲ့သို့ ရှိလာပြန်၏။ ဒါကြောင့် ကျမမှာလဲ အရွယ်လဲ ရောက် သူ့အားလဲ ချစ်ခင်ကျင်နာလွန်းရခါ သူ့မျက်နာအား သေချာ လတ်ညိုးထိုးခါ လုပ်ပြီးရင် ပြန်မှာမဟုတ်လား ဟု မေးလိုက်၏။ ပြန်ပါ့မယ် တဲ့။ ဒါနဲ့ပဲ သူက ကျမပေါင်တွေကို ဖြဲကားလိုက်လေတယ်။ ကျမရင်တွေ ခုန်လိုက်တာ။ ကျမလေ ရှက်ကလဲ ရှက်ပါတယ်။ မရှက်ကလဲ မရှက်နိုင်တော့ပါဘူး.. ကျမဘ၀ အကုန်ပဲ.. ကျမ အရှက်အကုန်ပဲ မဟုတ်လား။ ဒါပေမဲ့ တသက်နဲ့တကိုယ် လူပျိုယောက်ျားလေးရဲ့ ဟိုဟာကို မြင်ဖူးချင်တဲ့ စိတ်ကြောင့်လား မျက်လုံးကပဲ သူ့အလိုလိုရောက်နေတော့လားမသိ.. သူ့ပုဆိုးကို လှမ်းနေတုန်းကြည့်မိ၏။ သူကပြောတယ် မျက်လုံးမိတ်ထားတဲ့။ အိုး…. ကျမရယ်လေ.. ရှက်လိုက်တာ ဘယ်သို့ပင်မရှိ.. ကျမကြည့်တာ သူတွေ့သွားလို့ ထင်တယ်နော်။ ကျမ မျက်လုံးမိတ်လိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ ကျမရဲ့ ရွှေခရုလေးနုတ်ခမ်းမှာ တေ့ထားတဲ့ သူ့ဒုတ်နဲ့ ထိုးချလိုက်တာမှာ။ ကျမလေ ကျမ… ဘယ်လိုသော နာကျင်မှုမျိုးမှန်းမသိ။ ကျမဟာ တောသူတောင်သားပါ ကျမ္မာသန်စွမ်းတဲ့ မိန်းမတယောက် သာမာန်အနာတရလောက် ခံနိုင်ရည် ရှိလှပါ၏။ သို့သောညားလဲ ယောက်ျားတယောက် ကျမ ရွှေခရုလေးကို ထိုးခွဲတဲ့ အချိန်မှာတော့ ခံနိုင်ရည်စွမ်းအား တောင့်ခံနိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေဆိုတာ ဘယ်မှာမှ ရှာမတွေ့။ အသည်ခိုက်လိုက်ပါဘိ။
သန်မာလိုက်တာ.. သူ့ခန္တာကိုယ်က သန်မာတာကော.. နောက်ပြီးလေ.. သူ့ဒုတ်က သံချောင်းတမျှ သန်မာနေတာမို့ ကျမ ကိုယ်ခန္တာကို ထိုခွဲလိုက်သလိုပါပဲ။ ကျမရုန်းကန်ခါ သူ့ ရင်ဘက်ကို တွန်းထုတ်ပေမဲ့။ သူ့က ကျမကို သိုင်းဖတ်ခါ အုပ်မိုးခါ လုပ်ပါတော့တယ်။ ကျမမှာလေ မငိုပေမဲ့ မျက်ရည်တွေကကျ ကျိတ်ခံရရှာတော့တယ်။ တချက်ထိုးအသွင်း တချက် အသည်းခိုက်၊ တချက်ပြန်အထုတ် တချက်အသည်းလှိုက်ပေါ့။ ကျမမှာ အော်လဲမရ။ သူ့ကို ရပ်ခိုင်းတော့လဲ မရပ်မို့ သူ့ခေါင်းက ဆံပင်တွေ ဆောင်ဆွဲ၊ လည်ပင်းကို ညစ်၊ နောက်ဆုံးတော့လဲ ချော့မော့ပြီး ဖြည်းဖြည်းလေး လုပ်ပါလားလို့ တောင်းပန် ပြောရတော့တယ်။ ပြောလိုက်မှပဲ သူက ဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူး မျက်နာကြီး မဲ့ရှုံ့ခါ အချက်နှစ်ဆယ်ခန့် ဆောင့်လုပ်ခါ ကျမပေါ်ကို မှောက်ကျလေတော့သည်။ သူရော ကျမပါ နှစ်ယောက်သား အကြာကြီးငြိမ်နေမိတယ်။ သူဖြစ်ဖြစ် ကျမဖြစ်ဖြစ် လှုပ်လိုက်တာနဲ့ ကျမရွှေခရုလေးက နာလှသမို့ သူ့မလှုပ်အောင် ပြန်ဖတ်ထားမိ၏။ ကျမ အဖြစ်ကတော့ အဲ့ဒီတညထဲတင် စာတင်လောက်ပါပေတယ်။ ကျမက မငိုပေမဲ့ သူကျမကို ချော့နေတာ နာရီဝတ်လောက်ကြာတယ်။ အဲ့ဒါ သူ့ကို ကျမက ပြောတယ် ပြန်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့ သူကပြန်ဖြေတယ် မပြန်သေးဘူးတဲ့။ နောက်တခါ လောက်ပါတဲ့ လတ်ညိုးလေးထောင်ပြီး မျက်နာငယ်လေး လုပ်ပြပြန်တယ်။ ကျမလေ အဲ့ဒီအချိန်ကျမှ တကယ်ပဲ ငိုချင်စိတ်ပေါက်သွားတော့တယ်။ ကဲ မထူးတော့ပြီ။ အမှန်ပင် ဒေါသထွက်လာပြီး ဒီတခါပြီး တကယ်ပြန်မှာလား..မေးလိုက်တယ်။ မျက်လုံးအ၀ိုင်းသားလေး ကျမကိုကြည့်ပြီး ခေါင်းငြိမ့်ပြတယ်။
ကျမသက်ပျင်းလေးချလိုက်ပြီး လှဲချလိုက်ရာ သူက ပြောတယ်.. မျက်လုံးလေး မှိတ်ထားနော်တဲ့။ ဟွန်း… အဲဒီလိုနဲ့ပဲ တခါထဲပါ ဒီတခါထဲ နောက်ဆုံးဆိုပြီး ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်၊ မျက်လုံးလေး မှိတ်ထားပါနော် လို့ပြောလိုက်နှင့်နေလာလိုက်တာ နံနက် ငါးချက်တီးသည် ထိပါပဲ။ ကျမထင်တယ်.. သူ ကျမပါးလေးကို နမ်းမယ်လုပ်တုန်းထဲက မျက်စိမှိတ်ခိုင်းတာနဲ့ နံနက်ငါးချက်တီးသည်ထိ မျက်လုံးလေးမှိတ်ခိုင်းတာ ကိုးခါ ဆယ်ခါလောက် ရှိမယ်ထင်ပါတော့တယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ အဲ့ဒိမီးဖိုချောင်ထဲက ကျမ ဘ၀ဖြစ်ပုံကတော့ ဆုတ်ပျက်သပ် ပျော့ဖက် ခွေယိုင်လဲခါ သူပြုသမျှကို နုရတော့တာပါပဲ ရှင်။ ဒီလို အမှတ်ရစရာ အကြောင်းတွေ တွေးမိတိုင်း ကျမစိတ်ထဲ မနေ့တနေ့ကလိုပါပဲ။ ပထမဆုံးနှင့် ငယ်ချစ်ဦးမို့ တသက်တာ မေ့မရနိုင်ခဲ့ပါ။ သူ့ကို သတိရလွမ်းဆွတ်တိုင်း အင်းအားမဲ့ ချိ့နဲ့စေပေမဲ့ တခါတလေတော့ စိတ်အစဉ်က တက်ကြွလန်းဆန်း တက်ပြန်တယ်။ ခုလို သူမြို့က ပြန်ရောက်နေတယ်လို့ ကြားလိုက်ရတဲ့ အချိန်ကစလို့ ကျမရင်တွေ ခုန်လွန်းလှပါတယ်။ ထမင်းအိုးအား ထမင်းရည်ငဲ့ခါ မီးဖိုပေါ်ပြန်တင်လိုက်၏။ ပြီးတော့ ရေလေး နည်းနည်းတောက်ခါ အဖုန်းပြန်ဖုံးထားလိုက်၏။ အောက်က မီးလေးတွေကို နည်းနည်းလျော့ မီးခဲလေးတွေချဲနေတုန်း ကျမရဲ့ လတ်မောင်းနှစ်ဖက်ကို နွေးထွေးတဲ့ လတ်တစုံက ဖမ်းဆုတ်ကိုင်ခြင်း ခံလိုက်ရ၏။ ရင်ထဲ တချက်ဒိန်းကနဲ့ လန့်သွားပြီး လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူရယ်ပါ။
“ … ဟင်… ကိုမြကြီး …” ပြန်မဖြေပဲ ကျမကို သူ့ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်ပြီး တင်းကျပ်စွားဖတ်ထား၏။ ဒါပေမဲ့ ကျမဲ့ အတင်းရုန်းထွက်ပြီး.. “ … ဒုက္ခပါပဲ တော်.. အိမ်မှာလူတွေ ရှိတယ်.. မြင်မကောင်းဘူး မတော်ဘူးတော်.. ပြန်ပါရှင် ပြန်ပါ …” “ … မညိုရင်ရယ်.. ကျုပ်ကိုလဲ သနားပါအုန်းဟယ်..မညိုရင်မှာ ကျုပ်ကို သနားတဲ့စိတ် လုံးဝ မရှိတော့ဘူးလား …” လုံးဝအလွတ်မပေးပဲ ဖတ်ထားမြဲဖတ်ထားပြန်၏။ “ … မတော်ဘူးတော်.. အိမ်မှာလူတွေရှိတယ် …” “ …ကျုပ်သိတယ် အကုန်လုံး တောင်ပိုင်းက ဗီဒီယိုရုံရောက်နေတယ်…” သူ အရင်အတိုင်းပါပဲ.. လတ်တွေက ကျမ ရင်သားတွေကို ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်နေပြန်ပြီ။ ကျမမှာ အသက်ကို မနည်းရှုနေရပြီလေ။ “ … ကိုမြကြီးရယ် မလုပ်ပါနဲ့ရှင် တောင်းပန်ပါတယ် ပြန်ပါတော့.. ဘေးလူတွေ မြင်ရင် အရှက်ရစရာကြီး ဖြစ်နေမယ်.. လွတ်ပါရှင် …” ပြောလိုက်မှပဲ အောက်ကိုပါ အတင်းနိုက်နေပြီ။ နိုက်နေတဲ့ သူ့လတ်ကို ကျမအတင်းဆွဲဖယ်၏။ ဒါပေမဲ့ မရ။ “ … ရှင်မလဲ …ခက်ရပါပြီ ကိုမြကြီးရယ်… …” မဖြစ်သင့်သည်မို့ ကျမ အားကုန်ရုန်း၏။ သူကလဲ အားကုန်ချုပ်ရင်း “ … မညိုရင် .. မညိုရင် အဲ့လို ရုန်းနေရင်တော့ဖြင့် ကျုပ် …ဒီမှာ မိုးလင်းပေါက် နေရပါလိမ့်မယ် …” ဟောကြည့် မျက်နာထားတင်းတင်းနှင့် မျက်ခုံးတို့ကို ပင့်ချီချချီ လုပ်နေတယ်။ ဒါ သူ့အကျင့်စရိတ်ပဲ တဇွတ်ထိုး။ သူလိုချင်ပြီဆို တဇွတ်ထိုး။ သူ့စိတ် သူ့အကျင့်ကို သိနေတော့ မထူးလှပြီမို့ အားလျော့မိ၏။ အားလျော့လိုက်တော့ ကျမထမီကို ဖြီချပြီး ရွှေခရုလေးကို အတင်းနိုတ်နေတော့တယ်။ သူလုပ်နေတာတွေကို မခံနိုင်လို့ သူ့ဖခုံးပေါ်လတ်ရင် ခေါင်းကလေးမှီပြီး ညည်းငြူမိသည်။
သူလဲ အသက်တွေ ပျင်းပျင်းရှုလို့ပေါ့။ ချွေးတွေလဲ ပြန်လို့။ ပြီးတော့ သူ့လတ်တဖက်က ကျမလတ်တဖက်ကို ဆွဲပြီး သူ့ဒုတ်ကို ကိုင်ခိုင်နေတယ်။ ကျမ သူ့ကို အကြည့်စူးစူးနဲ့ တချက်ကြည့်လိုက်တယ်။ မြို့က အကျင်ကောင်းတွေ တော်တော်တက်ခဲ့တယ်ပေါ့ ဆိုတဲ့ အပြောမျိုးကြည့်ခြင်း ဖြစ်တယ်။ သူက မိန့်မိန့်ကြီး ပြန်ကြည့်တယ်။ ယောက်ျားတွေ တော်တော်လေး မျက်နာအမျိုးမျိုး လုပ်တက်တယ်။ သူ့ကို သနားလို့ရယ်တော့ မဟုတ်ဘူး ကျမ လတ်က သူ့အလိုလို လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ ဟယ်တော့ ကိုင်ထားတာတောင် ပျော့နေတုန်း။ ခဏကြာတော့ တင်းပြီး တုတ်ခိုင်လာတယ်။ အဲ့အချိန်မှာတော့ ကျမ မကြည့်တော့ဘူး။ သူ့လတ်ကြမ်းကြီးကလဲ တချက်ချက် တအားပဲ အထဲထိကို ထည့်ထိုး ကုတ်ဆွဲတင်နေတော့တယ်။ နာလဲနာ ကောင်းလဲကောင်း ။ ပြီးတော့ သူခဏရပ်ရင်း ကျမ မေးစေ့လေးကို ယုယစွာကိုင်ခါ.. “ … မျက်လုံးလေး မိတ်လိုက်ပါအုန်း မညိုရင်…” လာပြီ။ အဲ့ဒိ မျက်လုံးခဏ မိတ်လိုက်တာ ကျမ ဘ၀ပျက်ရောမှတ်လား။ “ … မမိတ်ပေါင် တော်…” “ … မိတ်လိုက်ပါ မညိုရင်ရယ်… မျက်လုံးမိတ်လိုက်မှ ကိုယ်တို့ချင်း ရင်ခုံသံကို အတိုင်းသား ကြားရမပေါ့လို့…” “ … အောင်မလေးတော်.. ကြား .. ကြားဖူးပေါင်… မိတ်ဘူး ” “ … ဒါဆို… ဟိုဘက်လှည့် မညိုရင်…” “ … ဘာလုပ်မို့လဲ …” “ … လှည့်ပါဆို …” ကျမ ကျောပေးခါ လှည့်ပေးလိုက်တော့ “ … နည်းနည်းလေး ကုန်းလိုက်နော် …” ကျမ ဖင်ကို ကုန်းခိုင်းခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ကျမ ဒေါသတအား ထွက်ခါ ကဗျာကလျာ သူ့ဘက်ပြန်လှည့်လိုက်၏။ ပြီးနောက် အောက်မှာ ပုံလက်ကျနေသော ထမီအား ပြန်ကုန်းကောက် ၀တ်လိုက်တော့ ကျမလတ်တွေကို လာကိုင်၏။ ကျမ သူ့လတ်တွေကို ပုတ်ထုတ် ရင်း၊ သူ့ကို ပါးတချက် ရိုက်လိုက်တယ်။
“ … တော်ပြီ တော်ပြီ.. ရှင်ပြန်တော့ .. ရှင်ကျမကို ခွေးလိုနွားလို ကျင်မို့မှတ်လား မပြန်ဘူးလား ပြန်မှာလား ရှင့်မျက်နာကို မကြည့်ချင်တော့ဘူး ရွံ့တယ်ရှင် ပြန်တော့…” ကျမ အမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင် ကျမလဲ ခံချင်တာပေါ့။ မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စမို့သာ ဒီဖင်ကုန်းခိုင်းတာကို အကြောင်းပြပြီး ဒီကိစ္စမဖြစ်မြောက်အောင် ကျမ အကြောင်းပြ လုပ်လိုက်ခြင်းရယ်ပါ။ ကျမမှ ပါးရိုက်ပြီး ရင့်ရင့်သီးသီး ပြောလိုက်တော့ သူ ကျမကို မျက်လုံးအ၀ိုင်းသားလေးနဲ့ ကြောင်ကြည့်နေတယ်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒိမျက်လုံးအ၀ိုင်းလေးကပဲ မျက်ရည်တွေ စို့လာပြီး.. မျက်ရည်တွေ တပေါက်ပေါက်ကျလာတယ်။ ပြီးတော့ သူ အသံထိန်းခါ ချုန်းပွဲချ ထိုင် ငိုတော့တာပါပဲ။ ငိုကလဲငို ပါးစပ်ကလဲ ကျမကို သူ ဘယ်လောက်ချစ်တဲ့ အကြောင်း၊ နောက် သူ့ဘ၀ကံကြမ္မာအကြောင်းတွေ… တယောက်နဲ့တယောက် ဝေးရတဲ့ အကြောင်းတွေကို တောက်လျောက်သွန်ချတော့။ ကျမလဲ သူ့ကို သနားသလို ကျမကိုယ်ကျမလဲ သနားတယ်။ ကျမ နှလုံးသားမှာ နာလှတဲ့ ဒဏ်ရဒဏ်ချက်နှင့်မို့ ကျမဲ့ ကြာကြာမခံနိုင်တော့ပါ။ ဒါကြောင့်လဲ သူ့ရင်ခွင်ထဲ တိုးဝင်ခါ ငိုချလိုက်တော့တယ်။ ကျမ လတ်တွေက သူ့ကို အားကိုးတကြီး ဖတ်ထားမိတယ်။ သူကလဲ ကျမကို တင်းကျပ်စွာဖတ်ထားတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့ ချစ်သူရဲ့ ရင်ခွင်ဟာ တခဏလေးအတွင်းမှာ ဘယ်လောက်နွေးထွေးတယ် ဆိုတာ ကျမသိလိုက်တယ်။ ဒီညရဲ့ ငိုလိုက်တဲ့ ကျမတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ မျက်ရည်ဟာ ပင်လယ်ကြီးလောင်တောင် ရှိမယ်ထင်တယ်။
ကျမဘ၀မှာ ငိုလို့ အကောင်းဆုံး ညတညပါပဲ။ တော်တော်ငိုလိုက်တော့ လူလဲပေါ့သွားတယ် မျက်ရည်လဲ ကုန်သလောက်ရှိသွားပြီထင်။ သူကျမကို မျက်ရည်စလေးတွေနဲ့ စိမ့်စိမ့်ကြီးကြည့်နေတယ်။ ကျမ သူ့ရဲ့မေးစေ့မှာ တွဲလွဲခိုနေတဲ့ မျက်ရည်လေးကို သုတ်ပေးနေတုန်း… သူက တချက်ရှိုက်ရင်း… “ … ဟိုဘက်ကို လှည့်ပေးပါလား မညိုရင်ရယ်…” ကျမ သက်ပျင်းလေး အသာချရင်း လိုက်လျော့ချင်စိတ်က များလာတာ၏။ ဒါပေမဲ့ ကျမ မျက်နာထားကို တည်ငြိမ်စွာထားရင် စိတ်မပါတဲ့ လေသံဟန်ဆောင်ခါ… “ … ပြီးရင်တော့ ပြန်ရမယ်နော် ကိုမြကြီး …” သူ မျက်ရည်လေး သုတ်ရင်း ခေါင်းငြိမ့်ပြတယ်။ ကျမ သိပ်မယုံချင်။ ကျမနဲ့ သူ စချိန်းတုန်းကလဲ သူဒီလိုပဲ ပြောပြောပြီး မိုးလင်းပေါက် မသေရုံတမယ် လုပ်ခဲ့တာကြီးရယ်ပါ။ “ … ကိုမြကြီး ခေါင်းငြိမ့်မပြနဲ့ ပါးစပ်ကပြော ကျမ မယုံတော့ဘူးတော်.. တခါပဲနော် ပြီးတာနဲ့ ပြန်မယ်မဟုတ်လား.. ရှင်ယောက်ျားနော်.. ကတိနော်… …” “ … တခါထဲပါ မညိုရင်ရယ်.. ပြီးလို့မှ မပြန်ရင်… ဟော့ ဟို့…ထင်းပုံပေါ်က ဓားမနဲ့ ကျုပ်ဟာကို ဆင်းနီးတုံးပေါ်သာ တင်ပြီး ခုတ်ဖြက်လိုက်ပါတော့…” အပြောက အဲ့ဒီလို။ သူက ကျမဲ့ ခါးလေးကိုကိုင်မြောက်ခါ ဒူးထောက်ကုန်းခိုင်းတယ်။ ပြီးတော့ ကျမထမီကို လှန်ပြီး လတ်က ရွှေခရုလေးကို ဟိုဖြဲဒီဖြဲလုပ်နေတယ်။ ကျမလဲ ခံချင်လှပြီ။ ခုတော့ ယားတာလိုလို နာတာလိုလိုမို့ ကျမ တဘက်ကို လှဲချရင်း… “ … ကိုမြကြီးရယ် လုပ်စရာရှိ လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး ဘာတွေလုပ်နေလဲ မသိဘူး…” စောစောက ငိုတဲ့ မျက်နာပေးမဟုတ်တော့ ပြောင်စပ်စပ်မျက်နာနှင့် ကျမဖင်ကို ပြန်ဆွဲထောင်နေတယ်။ ကျမလဲ ပြန်ကုန်းပေးလိုက်၏။ ကြာလိုက်တာ ကျမရဲ့ ရွှေခရု အပေါက်ဝနားမှာ သူ့ ဒုတ်ကို တေလိုက် ပြန်ဖြဲထိုးထည့်လိုက် တော်တော်ကြာတယ်။
အသက်တွေလဲ ပြင်းပြင်းရှုသံတွေ ထပ်နေတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သူ ညည်းငြူသံကြီးနဲ့.. အိုး ဆိုပြီး ကြားလိုက်တယ်။ ကျမ ရွှေခရုထဲ စို့ကြီးစို့ထားသလို ပြည့်လျှံသွားတော့တယ်။ ကျမလဲ ကောင်းလှတဲ့ အရသာကြောင့် ဖင်လေးကို ချုံရင်း ညည်းမိတယ်။ ရင်ခေါင်းတခုလုံးလဲ အစာမရှိသလိုလို ခံစားရတယ်။ ကောင်းလိုက်တာ.. ဘယ်လိုကောင်းမှန်းမသိ။ ထုံးစံအတိုင်း ငတ်နေပျက်နေတဲ့အတိုင်း အားကုန် လုပ်ပါတော့တယ်။ ကျမ ကိုယ်လေး အရှေ့ကို လွတ်မထွက်သွားအောင်ပင် မနည်းထိန်နေရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ငြီးငြူသံကြီးနဲ့အတူ သူ ပြီးသွားပြီး ကုန်းလျက် ကျမကိုယ်ပေါ်တင် မှောက်လျက်သား။ ကျမလဲ ပင်ပန်းလှသမို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း မြေကြီးပေါ်တင် ဂရုမမူတော့ပဲ မှောက်ချလိုက်တယ်။ သူ့လဲ သူ့ဒုတ်ကြီး ကျမရွှေခရုလေးမှာ တပ်ရင်းတန်းလျက် ကျမအပေါ် မှောက်နေတယ်။ အချိန်းတော်တော်ကြာအောင် မိန်းနေလိုက်တယ်။ သူကတော့ ရှိုက်ကြီးတငင် အသက်ရှုလို့ပေါ့။ ကျမလဲ မတွေ့တာကြာလို့လား မသိ ကောင်းလွန်းလှသမို့ မိန်းနေတုန်း.. “ … ဟယ်.. အမေတို့ အဲ့ဒါ ဘာဖြစ်နေကြတာလဲ …” ကျမ အသံကြောင့် အလန့်တကြား ထပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သမီးကြီး။ အောင်မလေး သေပါပြီ။ ဒီမှောက်မိုက်ဇာတ်ထဲ မျောနေလိုက်တာ ပတ်ဝန်ကျင်ကို မေ့၊ အိမ်သားတွေကို မေ့နေလိုက်တာ။ နှစ်ယောက်သား ဂ”ငမျောက်ငခြောက်”တန်းထ ထမီဝတ် ပုဆိုးပြင်ဝတ်နှင့် ရှက်လိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း။ သားသမီးရှေ့တင် လူမိသမို့ ကိုမြကြီးနဲ့ ကွယ်ရမလိုလို၊ ငုတ်တုတ်ထိုင်ရမလိုလို၊ ထွက်ပြေးရမလိုလို ဖြစ်နေ၏။ ထွက်ပြေးလို့လဲ မဖြစ်။ သမီးကြီးကတော့ အံ့သြခြင်း၊ ဒေါသထွက်ခြင်းနှင့်အတူ တဆက်ဆက်တုန်နေ၏။ သူ့လတ်မှာလဲ ထမင်းဇလုံကြီးနဲ့… “ … ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ… အမေတို့ မရှက်ကြဘူးလား …” သူ့အသံက ပြဲလှသည်။
သူက သမီးတွေကြီး သုံးယောက်ထဲက တဦးထဲသော အိမ်ထောင်ကျနေသော သမီးကြီးပါ။ အိမ်ထောင်ကျပြီး တောင်ပိုင်းက သူ့ယောက်ျားအိမ်တွင် လိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ တခါတရံမှ လာတက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူက ဇရိုက်ကြမ်း အပြောကြမ်း၏။ ကြမ်းဆို အိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေးမွေးတာ ခုနှစ်ယောက်။ ခုအိမ်လာတောင် ဗိုက်ကြီးနဲ့။ ကျန်တဲ့ သမီးလတ်နှင့် သမီးငယ်ကတော့ အပျိုကြီးတွေ ဖြစ်၏။ အငယ်ဆုံးမလေး ခါလယ်ကျော်လောက်တင် သူတို့အဖေ အိမ်ကအတင်းပေးစားသော ကျမရဲ့ ယောက်ျား ပိုးထိလို့ သေသွားခဲ့၏။ ကိုမြကြီးမှာတော့ ကျမ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့က စလို့ ပျောက်ချင်းမလှပျောက်သွားတာ မနေ့တနေ့ကမှ ပြန်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်၏။ “ … တိုးတိုးပြောပါ သမီးရယ် ဘေးကကြားမှ ဖြင့်…” ပြောလိုက်တော့ သူ့အသံကို သူထိန်းရင်း မျက်နာထားတင်းစွာ ရှေ့တလှမ်းတိုးပြီး လတ်ညိုးကလဲ ထိုးလျက် အံ့ကို ကျိတ်ခါ… ဆက်ပြောတယ်.. “ … ခုကြတော့ ရှက်သေးလား.. ဟင်း.. အော်.. အိမ်မှာ ထမင်းပြက်သွားလို့ ကိုယ့်အမေအိမ်လာယူပါတယ်.. ဒီမှာ ဇာတ်ခင်းနေကြတယ်.. အမေရယ်… ကိုယ့်အိမ်မှာလဲ သမီးအပျိုကြီးတွေ နှစ်ယောက်ရှိသေးတယ်.. ဟင်.. ဒီအသက်အရွယ်ကြီးလဲ ရောက်နေပြီ… ခြောက်ဆယ်တောင်ပြည့်လို့ တနှစ်တောင် စွန်းနေပြီ… မရှက်ကြဘူးလား မလျော့နိုင်သေးဘူးလား…
ဟင် ဒီအရွယ်ကြီးရှင် လင်စိတ်သားစိတ်တွေ ကုန်ပြီမှတ်တယ်.. ဘယ့်နုယ့်တော်.. သူများတွေသိရင်ဖြင့်.. အမေ သမီးတို့ကို အရှက်ခွဲနေတာလား … အံ့သြလွန်းလို့ မဆုံးနိုင်ဘူး.. ဟင်.. တသက်နဲ့ တကိုယ်ကြုံဖူးဘူး… ကြုံမဲ့ကြုံတော့လဲ ကိုယ့် အမေ ဖြစ်နေတယ် အရပ်ကတို့ရေ… အသက်အရွယ်ကြီးတွေနဲ့ မရှက်ကြတာကို အံ့သြလွန်းလို့ပါ…” သမီးကြီးကတော့ တော်တော် ဒေါသပါတဲ့ လေသံပါ ကျမကိုပြောရင်း ကိုမြကြီးကိုလဲ အစိမ်းစားမည့်ပုံနှင့် ကြည့်နေ၏။ “ … အဘကလဲ ဒီအသက်အရွယ်ကြီးရောက်နေပြီ.. မလုပ်သင့်တော့ပါဘူး.. သူများအိမ်ထဲ ၀င်ပြီးပိုတောင် မလုပ်သင့်တော့ဘူး… ဒီမှာလဲ သမီးပျိုတွေနဲ့.. ဘာလဲ.. အဘက ကျမ အမေကို အတင်းကြံတာလား…” သမီးကြီးကပြောလိုက်တော့ ကိုမြကြီးမှာ ပျာပျာသလဲဖြင့်.. လတ်ကာပြရင်း ကျမပခုံးကို လှန်းဖက်၏။ ကျမလဲ ရှက်ရှက်နဲ့ အတင်းတွန်းဖယ်၏။ သို့ပေမဲ့ မရလို့ မျက်နာအောက်ချခါ ငြိမ်နေလိုက်တယ်။ သူက ဖက်ရင်း မျက်နာငယ်လေးဖြင့် သမီးကြီးကို ပြောလိုက်တယ်။ “ … မဟုတ်ရပါ သမီးရယ်.. အဘတို့. ငယ်ကချစ်ဟောင်းတွေပါ …” “ … ဘာ.. ငယ်ချစ်ဟောင်းတွေ ဟုတ်လား… ငယ်ကချစ်ဟောင်းတွေက နှစ်ယောက်ပေါင်း အသက်ကတရာ့နှစ်ဆယ် ကျော်နေပြီ … သချိုင်းကုန်း တဖက်လှမ်းနေတာတောင် ..ခုထိ တဏှာစိတ်တွေက လျော့ လျော့နိုင်သေးဘူး… ပြီးပါပြီ